Ruka 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 1:1-80
Mashoko kuna Tiyofiro (1-4)
Gabrieri anotaura nezvekuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi (5-25)
Gabrieri anotaura nezvekuberekwa kwaJesu (26-38)
Mariya anoshanyira Erizabheti (39-45)
Mariya anorumbidza Jehovha (46-56)
Johani anoberekwa uye anotumidzwa zita (57-66)
Uprofita hwaZekariya (67-80)
1 Pandakaona kuti vakawanda vakanyora nhoroondo yezvakaitika yatinonyatsobvumirana kuti ndeyechokwadi,+ 2 sekupfuudzwa kwayakaitwa kwatiri nevaya vaiva zvapupu zvezvinhu izvi+ kubvira pakutanga uye vakazivisa shoko iri,+ 3 ini ndakasarudzawo kukunyorerai mashoko acho kuti munyatsonzwisisa kutevedzana kwenyaya yacho, imi munoremekedzwa kwazvo Tiyofiro, nekuti ndakanyatsoronda zvinhu zvese kubvira pazvakatangira,+ 4 kuti munyatsova nechokwadi nenyaya iyi yamakaita zvekutaurirwa nemuromo.+ 5 Mumazuva aHerodhi,*+ mambo weJudhiya, kwaiva nemumwe mupristi ainzi Zekariya weboka rekwaAbhija.+ Mudzimai wake aiva wedzinza raAroni,* uye ainzi Erizabheti. 6 Vese vakanga vakarurama pamberi paMwari, vachifamba vasina chavanopomerwa maererano nemirayiro yese nemitemo yaJehovha.* 7 Asi vakanga vasina mwana, nekuti Erizabheti aishaya mbereko, uye vese vakanga vachembera. 8 Paakanga achishumira semupristi riri jana reboka rake+ pamberi paMwari, 9 semarongerwo akanga akaitwa basa reupristi, nguva yake yakasvika yekuti apinde anopa rusenzi+ munzvimbo tsvene yaJehovha.*+ 10 Uye vamwe vanhu vese vakanga vachinyengetera vari panze panguva yaipiwa rusenzi. 11 Ngirozi yaJehovha* yakazviratidza kwaari, yakamira kurutivi rwerudyi rweatari yerusenzi. 12 Asi Zekariya akanetseka paakaiona, akatya zvikuru. 13 Asi ngirozi yacho yakati kwaari: “Usatya, Zekariya, nekuti munyengetero wako wekuteterera wanzwikwa, uye mudzimai wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana. Unofanira kumutumidza kuti Johani.+ 14 Uchafara nekufarisisa, uye vazhinji vachafara nekuzvarwa kwake,+ 15 nekuti achava mukuru pamberi paJehovha.*+ Asi haafaniri kunwa waini kana chero chinwiwa chinodhaka,+ uye achazadzwa nemweya mutsvene kunyange paanenge asati azvarwa,*+ 16 uye achadzorera vanakomana vaIsraeri vakawanda kuna Jehovha* Mwari wavo.+ 17 Uyewo, achaenda pamberi pake nemweya* nesimba+ zvaEriya, kuti adzorere mwoyo yavanababa kuvana,+ uye adzore vasingateereri kuti vawane uchenjeri hwevakarurama, kuti aite kuti Jehovha* ave nevanhu vakagadzirira.”+ 18 Zekariya akati kungirozi yacho: “Ndingava sei nechokwadi nazvo? Nekuti ndakwegura uye mudzimai wangu achembera.” 19 Ngirozi yakamupindura ichiti: “Ndini Gabrieri,+ anomira pamberi paMwari,+ uye ndatumwa kuzotaura newe uye kuzokuzivisa mashoko aya akanaka. 20 Asi chinzwa! Uchange wakanyarara usingagoni kutaura kusvikira zuva rinoitika zvinhu izvi, nekuti hauna kutenda mashoko angu, ayo achazadziswa kana nguva yacho yasvika.” 21 Nguva yese iyi vanhu vakanga vakamirira Zekariya, uye vakashamiswa kuti akanga anonoka zvakadaro ari munzvimbo tsvene. 22 Paakazobuda, akanga asisagoni kutaura navo, uye vakanzwisisa kuti akanga achangobva kuona chiratidzo munzvimbo tsvene. Akaramba achingoshandisa maoko, asingagoni kutaura navo. 23 Mazuva ebasa rake dzvene paakapera, akabva aenda kumba kwake. 24 Gare gare, Erizabheti mudzimai wake akava nepamuviri, uye haana kubva pamba kwemwedzi mishanu, achiti: 25 “Izvi ndizvo zvandaitirwa naJehovha* iye zvino. Afungawo nezvangu kuti abvise kuzvidzwa kwangu pakati pevanhu.”+ 26 Mumwedzi wake wechitanhatu, ngirozi inonzi Gabrieri+ yakatumwa ichibva kuna Mwari kuti iende kuguta reGarireya rinonzi Nazareta, 27 kumhandara+ yakanga yavimbiswa kuroorwa nemurume ainzi Josefa weimba yaDhavhidhi, uye mhandara yacho yainzi Mariya.+ 28 Ngirozi yacho yakasvika kwaari ikati: “Kwaziwa, iwe akanzwirwa nyasha kwazvo, Jehovha* anewe.” 29 Asi iye akanetseka kwazvo nemashoko acho, achiedza kunzwisisa kuti uku kungava kukwazisa kwerudzii. 30 Saka ngirozi yacho yakati kwaari: “Usatya hako Mariya, nekuti wanzwirwa nyasha naMwari. 31 Uye uchava nepamuviri, wobereka mwanakomana,+ uye unofanira kumutumidza kuti Jesu.+ 32 Uyu achava mukuru+ uye achanzi Mwanakomana weWekumusorosoro,+ uye Jehovha* Mwari achamupa chigaro cheumambo chababa vake Dhavhidhi,+ 33 uye achava Mambo paimba yaJakobho nekusingaperi, uye Umambo hwake hahuzogumi.”+ 34 Asi Mariya akati kungirozi yacho: “Izvi zvingaitika sei ini ndisiri kurara nemurume?”+ 35 Ngirozi yacho yakamupindura kuti: “Mweya mutsvene uchava pauri,+ uye simba reWekumusorosoro richakufukidza. Saka achaberekwa wacho achanzi mutsvene,+ Mwanakomana waMwari.+ 36 Uye Erizabheti hama yako avawo nepamuviri pemwanakomana, kunyange zvazvo achembera, zvekuti uno watova mwedzi wake wechitanhatu, iye achinzi nevanhu mukadzi asingabereki; 37 nekuti hapana chinoziviswa naMwari chinotadza kuzadziswa.”*+ 38 Mariya akabva ati: “Onai! Ini ndiri murandasikana waJehovha!* Ngazviitike kwandiri sekuzivisa kwamaita.” Ngirozi yacho yakabva yaenda. 39 Saka izvi zvichangoitika, Mariya akasimuka, akaenda nekukurumidza kunyika yemakomo, kuguta remunharaunda yeJudha, 40 uye akapinda mumusha waZekariya, akakwazisa Erizabheti. 41 Erizabheti paakanzwa Mariya achimukwazisa, mwana aiva mudumbu make akakwakuka, uye Erizabheti akazadzwa nemweya mutsvene 42 akashevedzera nenzwi guru kuti: “Wakakomborerwa iwe pakati pevamwe vakadzi, uye mwana ari mudumbu mako akakomborerwa! 43 Saka ndiri aniwo zvangu ini, kuti ndishanyirwe naamai vaShe wangu? 44 Nekuti ufunge pandangonzwa inzwi rako uchindikwazisa, mwana ari mudumbu mangu abva akwakuka nemufaro. 45 Anofarawo iye akatenda zvaakaudzwa, nekuti zvinhu izvozvo zvaakataurirwa naJehovha* zvichazadziswa zvakakwana.” 46 Uye Mariya akati: “Mweya* wangu unokudza Jehovha,*+ 47 uye mwoyo wangu haungaregi kufarira kwazvo Mwari Muponesi wangu,+ 48 nekuti aona chinzvimbo chakaderera chemurandasikana wake.+ Chokwadi kubvira iye zvino zvizvarwa zvese zvichati ndakakomborerwa,+ 49 nekuti Ane simba andiitira mabasa makuru, uye zita rake idzvene,+ 50 uye kwezvizvarwa nezvizvarwa ngoni dzake dziri pane vaya vanomutya.+ 51 Ashandisa simba reruoko rwake; aparadzira vaya vane mwoyo inoronga zvinhu zvekuzvikudza.+ 52 Aderedza vanhu vane simba pazvigaro zveumambo,+ uye akakwidziridza vakaderera;+ 53 anyatsogutsa vane nzara nezvinhu zvakanaka+ uye aita kuti vaiva nepfuma vaende vasina chinhu. 54 Ayamura Israeri mushumiri wake, achiyeuka ngoni dzake+ 55 nekusingaperi, sekuudza kwaakaita madzitateguru edu, Abrahamu nevana*+ vake.” 56 Mariya akagara naye kwemwedzi ingasvika mitatu, akazodzokera kumusha kwake. 57 Nguva yekuti Erizabheti asununguke yakazokwana, uye akabereka mwana mukomana. 58 Uye vavakidzani vake nehama dzake vakanzwa kuti Jehovha* akanga amunzwira ngoni zvikuru, vakafara naye.+ 59 Pazuva rechi8 vakauya kuzochecheudza mwana wacho,+ uye vaida kumutumidza zita rababa vake rekuti Zekariya. 60 Asi amai vake vakapindura vachiti: “Aiwa! Achanzi Johani.” 61 Vakabva vati kwaari: “Hapana kana hama yenyu ine zita iroro.” 62 Vakabva vataura nemaoko vachibvunza baba vake kuti vaida kuti anzi ani. 63 Saka baba vacho vakakumbira puranga rekunyorera, vakanyora kuti: “Anonzi Johani.”+ Vese vakashamiswa nazvo. 64 Muromo wake wakabva wangovhurika pakarepo, rurimi rwake rukasununguka, akatanga kutaura+ achirumbidza Mwari. 65 Vavakidzani vavo vese vakatya, uye zvinhu zvese izvi zvakatanga kutaurwa munyika yese yemakomo yeJudhiya. 66 Uye vese vakazvinzwa vakazvichengeta mumwoyo mavo, vachiti: “Mwana uyu achava munhu akaita sei?” Nekuti ruoko rwaJehovha* rwaiva naye zvechokwadi. 67 Baba vake Zekariya vakabva vazadzwa nemweya mutsvene, vakaprofita vachiti: 68 “Jehovha* Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe,+ nekuti afunga nezvevanhu vake uye avaunzira ruponeso.+ 69 Uye atimutsira nyanga yeruponeso*+ mumba memushumiri wake Dhavhidhi,+ 70 sekutaura kwaakaita achishandisa vaprofita vake vatsvene kubvira kare,+ 71 kuti achatiponesa pamhandu dzedu uye pamaoko evaya vese vanotivenga;+ 72 kuti aratidze ngoni achifunga nezvemadzitateguru edu uye kuti ayeuke sungano yake tsvene,+ 73 mhiko yaakapikira Abrahamu tateguru vedu,+ 74 kuti pashure pekunge tanunurwa pamaoko evavengi, atikomborere nekuita kuti timuitire basa dzvene tisingatyi, 75 tichiriita nekuvimbika, nekururama pamberi pake mazuva edu ese. 76 Asi kana uri iwe mwanangu, uchanzi muprofita weWekumusorosoro, nekuti uchafanotungamira pamberi paJehovha* kuti ugadzirire nzira dzake,+ 77 kuti uzivise vanhu vake shoko reruponeso runobva pakukanganwirwa kwezvivi zvavo,+ 78 nekuda kwetsitsi huru dzaMwari wedu. Tsitsi idzi dzichaita kuti mambakwedza atishanyire achibva kumusoro, 79 achivhenekera vaya vakagara murima nemumumvuri werufu,+ nekutungamirira tsoka dzedu munzira yerugare.” 80 Uye mwana wacho akakura, akava munhu ane pfungwa dzakadzama,* uye aigara murenje kusvikira zuva raakazozviratidza pachena kuna Israeri.
^ ChiGir., “wevanasikana vaAroni.”
^ Kana kuti “kubvira mudumbu maamai vake chaimo.”
^ Shoko racho rechiGiriki nderekuti pneuʹma. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “hapana chisingabviri kuna Mwari.”
^ Kana kuti “mununuri ane simba.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Nyanga.”
^ ChiGir., “akasimba mumweya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mweya.”